Darpan Nepal – फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक अवस्थाको भिडियो ,एकै छिनमा नौ लाख पटक हेरीयो
Apr 15, 2018adminNews09
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् कि ?कतै उनीहरुसँगै छिल्लिएर भिडियोमा कुराकानी गर्ने बानी छ भने साबधान ! सम्झनुस तपाई अब फस्नु भयो ! अझै तपाई यहि कुराकानीमा नांगिनुभएको छ भने त पक्का हुनुस् तपाईको नांगो शरिर र गोप्य अंगको भिडियो लाखौंले हेरिसक्यो ।
वेभसाईटको साईटभिजिट मापन गर्ने एलेक्साका अनुसार, यो साइट दक्षिण कोरियामा हेरिने साइटमा ८९३ नम्बरमा छ भने संसारभर हेरिने साइटमा यो शनिबार २१,४९१ मा छ । काठमाडौँमा केही इन्टरनेट प्रदायकले यो साइटलाई ब्लक गरेका भएपनि । नोट: भिडियो १८ बर्ष तलकाले हेर्न नमिल्ने भएकाले हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेनौं –
Previous Postफेसबुक विवाद :अमेरिकी सांसदको ६ सयभन्दा बढी प्रश्न,मार्क जुकरबर्गको उत्तर Next Postतपाईलाई थाहाँ छ, नेवार महिलाहरुले किन लगाउँदैनन् फुली? यस्तो छ कारण